Wasiir Xirsi Oo Khudbad Soo Jiidatay Ciidamadii la Qarameeyay ka Jeediyay Fiqi-fuliye | Somaliland.Org
Wasiir Xirsi Oo Khudbad Soo Jiidatay Ciidamadii la Qarameeyay ka Jeediyay Fiqi-fuliye
July 20, 2013	“Darajadda ugu weyn ee aanu Bixin Jirnay Waa Mujaahid, Markaa waxaad tihiin Mujaahidiin”
“Waxaad Garateen in Xabadda iyo Xoogu aanu Xal ahayn, inaydaan xoog ku baadi doonin, Annaguna Taas ayaanu ku shaqaynaynaa”
“Waxaad xaq u leedihiin wax kasta oo ciidanka qaranku leeyahay haddii ay darajo tahay iyo haddii ay mushahar tahay-ba, haddii ay dalacsiin” Fiqi-fuliye(Somaliland.Org)- Wasiirka Madaxtooyadda Somaliland Mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa maleeshiyadii maanta lagu qarrameeyay deegaanka Fiqi-fuliye ee gobolka Sanaag ku ammaanay inay garteen in aan xoog waxba lagu baadi doonin ee xalku shaqeeyo.
Wasiirku waxa uu sidaasi ka sheegay khudbad xiise iyo xamaasad waddaniyeed gelisay quluubtii bulshadda ku dhaqan degmadda Fiqifuliye iyo maleeshiyaddii la qarrameynayayba.
Wasiir Xirsi waxa uu ugu horayn u mahad celiyay ciidankan ku soo biiray ciidammadda qaran iyo dhinacyadii ka qeyb qaatay ka midho dhalinta waan-waan muddo u soo socotay madax dhaqameedka beesha degmaddaasi iyo xukuumadda Somaliland, isagoo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Ciidammadda, Garaadada iyo cuqaasha halkan fadhida waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaanan leeyahay Asalaamu Calaykum warax-matulaahi wabarakaatu. Salaan ka dib waxaan ku faraxsan nahay kulankeenan nabadeed ee deegaanka Fiqi-fuliye laga sameynayo ee Ciidammadda la qarramaynayo. Intii ka shaqaysay ee nagala qeyb qaatayna waanu u mahad naqaynaa. Arrintan aynu maanta u fadhino wakhti badan baa loo huray, tacab badan baa la geliyay.”
“Wada hadladii socday maanta haddii ay rumowday aad iyo aad ayaan garaadka iyo ragga kale ee ka shaqeeyay-ba uga mahad celinaynaa. ILAAHAY-na waxaanu uga rajaynaynaa inuu khayr iyo ajar ka siiyo wanaaga ay ka shaqeeyeen,”ayuu yidhi Wasiirka Madaxtooyaddu.
Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Ciidammadda halkan fadhiya waxaan leeyahay maanta wixii laga bilaabo waxaad ka mid tihiin ciidammadda qaranka. Waxaad xaq u leedihiin wax kasta oo ciidanka qaranku xaq u leeyahay haddii ay darajo tahay iyo haddii ay mushahar tahay-ba, haddii ay dalacsiin, muumuus iyo marwaad tahay-ba.”
“Walaaleyaal aad iyo aad ayaanu idiinku bogaadinaynaa haddii ay oday tahay iyo haddii ay askari tahay-ba inaad nala garateen in xabadda iyo xoogu aanu xal ahayn, inaydaan xoog ku baadi doonin, annaguna( xukuumadda) aanaan xoog ku doonin oo aynu garateen inaad duudsigu waxba tarin, in cududu aanay shaqayn ee caqligu shaqeeyo. Annaguna taas ayaanu ku shaqaynaynaa in caqligu shaqeeyo,”ayuu yidhi Wasiir Xirsi.
Wasiirku waxa uu intaasi ku kabay “Waxa loo baahan yahay inaynu danteenna wada garano. Waxaan jecelahay inaan xuso marka aanu Hargeysa joogno ka sokow darajadan imika la bixinayo darajadda ugu weynayd ee aanu bixin jirnay waxay ahayd “MUJAAHID”, markaa dee Mujaahidiin ayaad tihiin. Walaaleyaal waxay wax ku qabsoomaan wada jirka, waxba ma tarto cunfiga iyo colaaddu.”
Wasiirka oo waxa uu intaas ku daray “Waxaanu aad iyo aad idiinku soo dhawaynayaa dalkiinii iyo dadkiinii. Waxaanu diyaar idiinla nahay qalbi furan iyo wax wada qabsi. Wixii horumar ah ee deegaankani u baahan yahay awoodu inkasta ha gaadho ee waxaanu diyaar idiinla nahay inay qeybtooda ka helaan.”
Wasiirka Madaxtooyaddu waxa sheegay in xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ay goboladda bari u qorshaysay nabadeyn iyo horumarin sal balaadhan, isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxa madaxweynuhu khudbadiisii Goleyaasha uu ku saleeyay oo dhab naga ahayd oo muuqan doonta inuu deegaankan ugu tallo galay horumarin, haddii ay tahay Sanaag bari, Sool iyo Buuhoodleba, qorsheyaashaasi oo loogu tallo galay in lagu horumariyo caafimaadka, biyaha, waxbarashadda iyo guud ahaan adeegyadda bulshadda ee daruuriga ah.”
“Waxaan Jecelahay inaan xuso had iyo jeer dawladaha yar yar ee innaga oo kale ahi ma laha awood dhaqaale oo ay dalka ku horumariyaan, ama way yar tahay, waxa had iyo goor caawimadda laga helaa Ha’yadaha madaxa banaan ee aan dawliga ahayn. Deegaamaddu waxay u qeybsan yihiin qeybo. Meel aanay gaadhi Karaan iyo meel aanay geliba Karin,taas ayaa kala horumarisa deegaanka. Waxaanu idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan sidii ammaanka loo sugi lahaa. Haddii aan ammaanka la sugin horumarku ma islaaxo,”ayuu hadalkiisii ku soo gunaanaday Wasiirka Madaxtooyadda Md. Xirsi Cali Xaaji Xasan
Previous PostWasiirka Warfaafinta Oo Faah-faahiyay Maleeshiyad Lagu Qarrameeyay Fiqi-fuliyeNext PostAbaal Marino Qaali ah oo Lagu Bixiyay Tartankii quraanka kariimka oo la soo gabo-gabeeyay	Blog